Kedu ihe dị njọ saịtị saịtị na-eme karịa ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa? | Martech Zone
ComScore weputara ya Akwụkwọ ọcha na nhichapụ kuki. Kuki bụ obere faịlụ nke ibe weebụ nwere ike ịchekwa ozi maka ahịa, nyocha, nchịkọta, na iji nyere aka na ahụmịhe onye ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ịlele igbe iji chekwaa ozi nbanye gị na saịtị, a na-echekwa ya na kuki ma nweta oge ọzọ ị mepere ibe ahụ.
Kedu ihe bụ onye ọbịa pụrụ iche?
Maka ebumnuche nyocha, oge ọ bụla ibe weebụ setịpụrụ kuki, akara ya dị ka ọbịa ọhụụ. Youlaghachi, ha hụrụ na ị banyela ebe ahụ. Enwere di na nwunye di iche na uzo a:
Ndị ọrụ hichapụ Kuki… ọtụtụ karịa ka ị chere.
Otu onye ọrụ na-enweta websaịtị site na ọtụtụ kọmputa ma ọ bụ ihe nchọgharị.
Saịtị akụkọ mpaghara nwere ike ịgba ndị mgbasa ozi ụgwọ dabere na ozi dị ka nke a. N'ezie, akwụkwọ akụkọ Indianapolis dị na mpaghara na-ekwu,
IndyStar.com bụ Central Indiana si Nke 1 online akụ maka ozi ọma na ozi, na-anata ihe karịrị nde 30 echiche peeji, 2.4 nde ndị ọbịa pụrụ iche na nleta nde 4.7 kwa ọnwa.
Ego ole ka nhichapụ kuki ga - ehichapụ kuki?
Nsonaazụ ọmụmụ ahụ gosipụtara na ihe dịka 31 pasent nke ndị ọrụ kọmputa kọmputa US kpochapụrụ kuki ndị ọzọ ha n'ime otu ọnwa (ma ọ bụ kpochapụ ha site na ngwanrọ akpaaka), na-enwe nkezi nke kuki 4.7 dị iche iche maka otu saịtị ahụ n'ime ngalaba ọrụ a. . Ihe omumu nke onwe nke ndi Belden Associates mere na 2004, nke JupiterResearch na 2005 na nke Nielsen / NetRatings nwere na 2005 kwubiri na ihicha kuki site na ihe dika pacenti iri ato nke ndi n’enye intanet n’ime otu onwa.
N'iji ihe nlere nke ulo comScore US di ka isi, a huru ihe di iche iche kuki abuo nke abuo na komputa nke Yahoo! Nchọpụta a na-egosi na, n'ihi nhichapụ kuki, sistemụ ihe nkesa na-arụ ọrụ nke na-eji kuki iji tụọ nha nke ntọala ndị ọbịa na saịtị ahụ ga-emekarị ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa pụrụ iche site na ihe ruru 2.5x, nke bụ ịsị overstatement nke ruru 2.5 percent. N'otu aka ahụ, ọmụmụ ahụ chọpụtara na sistemụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-eji kuki iji chọpụta njedebe na ugboro ole mgbasa ozi ịntanetị ga-emebiga ihe ókè site na ihe ruru ihe ruru 150x na ogo ugboro ole n'otu ogo. Actualdị oke okwu nke oke okwu na-adabere ugboro ole ị gara na saịtị ma ọ bụ na-ekpughere mgbasa ozi.
A na-erigbu ndị mgbasa ozi?
Enwere ike! Were saịtị dịka saịtị akụkọ mpaghara ahụ na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na nde na-adaba ozugbo n'okpuru nde ndị ọbịa. Saịtị saịtị bụ saịtị a na-agakarị, yabụ na ọnụọgụgụ ahụ nwere ike ịdị ala karịa nke ahụ. Ugbu a tinye ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ akwụkwọ na-eleta saịtị ahụ n'ụlọ na ọrụ ma ị na-ahapụ nọmba ahụ ọzọ dị mkpa.
Nke a bụ nsogbu nye ochie 'eyeballs' ìgwè mmadụ. Ọ bụ ezie na ndị ahịa na-ere ahịa mgbe niile site na ọnụọgụ, weebụsaịtị ha nwere ike ịnwe ndị ọbịa pere mpe karịa ndị na-asọ mpi. N'ezie, ọ nweghị ụzọ dị mma iji 'dozie' okwu ahụ. Ọ bụ ezie na onye ọrụ weebụ ọ bụla nwere ọkara ụbụrụ na-amata na nke a bụ ikpe, anaghị m anwa ịkọwa na saịtị na-ebubata ọnụọgụ ha. Ha anaghị ekwufe ọnụ ọgụgụ ha na ebumnuche… ha na-akọ akụkọ ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ. Ọnụ ọgụgụ na-eme ka a ghara ịdabere na ya.
Dika usoro ahia ahia obula, gbado anya na nsonaazụ ya ma obughi na onu ogwu! Ọ bụrụ na ị na- na-atụle ọnụego dị n'etiti ụdị mgbasa ozi, ị ga-achọ itinye ụfọdụ mgbakọ na mwepụ ọsọ ọsọ ka ọnụọgụgụ ahụ dị ntakịrị karịa!
Tags: nọmba admgbasa ozimgbasa ozi bara urumezieNhichapụ kukiọnụ ọgụgụ ndị ọbịa
MySQL Ajụjụ maka ịdọrọ ngalaba na WordPress
Jun 8, 2007 na 1:48 AM
Ikekwe n’ọdịnihu ihe n’ahịrị nke CardSpace ga-eme ka nsogbu a pụta ìhè. Agbanyeghị, ọ nwere ike bụrụ oke nwanne. Anyị ga-echere ma hụ.
Jun 8, 2007 na 8:32 AM
i kwuru ya, ọ nweghị ụzọ ziri ezi esi achọpụta ndị ọbịa pụrụ iche na webụsaịtị.
kuki abughi ihe kwesiri ntukwasi obi ma ugbu a otutu mmadu na eji flash maka nchekwa ndi ahia.
Mana maka ndị mgbasa ozi, ihu peeji bụ naanị ihe dị mkpa. Ọ dị mfe iji chọpụta ọnụọgụ nke oge mgbasa ozi gosipụtara 🙂
Ma mgbe ahụ, ọtụtụ ọrụ ọnụ ọgụgụ weebụ nwere nsogbu nke ha. Live ọnụ ọgụgụ saịtị dị ka statcounter ga-gaa na akaụntụ a ole na ole nke ndị ọrụ na oge.
google Analytics ka mma na nke a, mana oge ụfọdụ m ga-echere ụbọchị abụọ iji nweta akụkọ kachasị ọhụrụ 🙁
E nyeghị ya ike
“A na-ahụ ihe dị ka kuki dị iche iche 2.5 na kọmputa maka Yahoo!”
Olee otú ọtụtụ ndị Yahoo ọrụ dị kwa kọmputa kọmputa? Ee, ikekwe gburugburu 2 ma ọ bụ 3. Amaara m na m na-apụ apụ nwunye m oge niile ka m wee lelee akaụntụ m, ma ọ bụ na Yahoo ma ọ bụ Google, Schwab ma ọ bụ saịtị ọ bụla ọzọ.
N'ụlọ anyị, anyị nwere 4 PC na Mac na ntanetị n'etiti ndị okenye 2, yabụ ọ na-eme ma ị nwere otu kọmputa ma ọ bụ ọtụtụ.
Ọ bụrụ na ị nwere saịtị reg na sava gị na-edekọ kemfe, mee ka akụkọ banyere aha maka adreesị IP ọ bụla. (nke a gosiri mmadụ ole na-ekekọrịta kọmputa / nwere akaụntụ dup). Mgbe ahụ mee akụkọ na-egosi ole IP ole aha ọ bụla pụtara. (nke a gosiri na a) ips na-eji ya megharịa ya site na isps na b) ndị ọrụ banye site na mpaghara ndị kachasị ewu ewu. )
Ee ee, ọnụọgụ 2.5 bụ ihe ziri ezi. Ọ bụghị wayo, ọ bụghị n'ụzọ gabigara ókè, dị mma. Enweghị akụkọ ebe a. Gaa n'ihu ugbu a.
Ihe edere edere anaghị ekwu banyere nbanye / ịbanye banyere kuki, ọ na-ekwu maka kuki nhichapụ na mmetụta ya na peeji nke pụrụ iche. Yahoo! adịghị ehichapụ kuki mgbe ị na-abanye ma na-abanye.
Na esemokwu bụ na ihe karịrị 30% nke ezinụlọ kpochapụrụ kuki ha, yabụ a na-ahụta gị dị ka onye ọbịa ọhụụ another abụghị onye ọzọ nọ n'ụlọ. Biko gụọ isiokwu ahụ maka nkọwa miri emi karị.
Ihe omuma gi bu ihe m kwuru na post m, na otutu ndi mmadu biara na otu saiti ahu site na otutu igwe. Site na PC 4 na Mac n'etiti ndị okenye 2, ọ bụrụ na ị gaa n'otu saịtị na igwe niile, enwere ike ịhụ gị dị ka 5 'ndị ọbịa pụrụ iche', ọ bụghị 2.5! Ma ọ bụrụ na ị na-ehichapụ kuki mgbe niile dị ka 30% + nke ndị bi na, nke ahụ gbanwere ihe karịrị ndị ọbịa 12.5 pụrụ iche.
Dị ka m kwuru, ekwetaghị m na ọ bụ wayo… mana ọ karịrị akarị. Ndị ezinụlọ gị gosipụtara ya.
Re-agụ isiokwu na nzaghachi gị ọzọ…ị nwetara ya. Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Daalụ maka ịkọwapụta.
N'ikwu ya, gautam ziri ezi – ọtụtụ ndị folks na-eji kuki ọkụ, ọbụlagodi mgbe ha enweghị ihe ọzọ kpatara ijere flash. Obere ihe ojoo: i nweghi ike ihichapụ kuki nke di na flash gi.
(Google anaghị efe ọkụ ọkụ. DoubleClick ka does)
Ọ bụrụ na saịtị chọrọ ịmịchaa ndị mgbasa ozi, ha kwesịrị nghọta karịa oge ole onye na-ele ihe anya, na mgbe.
Ebe ọ bụ na faịlụ ndekọ adịghị mma na nke ahụ, ha ga-achọ nza data na nchekwa data. Ebe nchekwa data dị ukwuu.
Ebe ọ bụ na nke ahụ agaghị eme n'oge na-adịghị anya, echiche kachasị mma, dị ka ị na-ekwu, bụ ilekwasị anya na nsonaazụ!